युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीतिमा खेल छिरेको भए
Monday, 01.20.2020, 11:06pm (GMT+5.5) Home Contact
राजनीतिमा खेल छिरेको भए
Tuesday, 02.17.2015, 03:07pm (GMT+5.5)
राजनीतिले नछुने कुनै क्षेत्र छैन । हरेक क्षेत्रलाई हाँक्ने नीति भएकैले यो श्रेष्ठ नीति हो । नीतिहरूको राजा नै राजनीति हो । तर यही राजनीति गलत किसिमले चल्यो भने बन्नुको साटो भत्किने मात्र हुन्छ । यस्तै भत्किदो क्रममा छ नेपालको हरेक क्षेत्र । राजनीतिको गलत अभ्यासले हरेक क्षेत्र प्रताडित छ । यसको पछिल्लो शिकार बनेको छ खेल क्षेत्र । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको खेलकूदमा व्यापक निराशा छ । नेपालको अन्य खेलको तुलनामा विश्वको ध्यान खिच्न सफल भैसेको क्रिकेटको अवस्था निकै नाजुक छ । क्रिकेटको वर्तमान हविगतले त्यसै भन्छ ।
यो सब खेल क्षेत्रमा घुसेको गलत राजनीतिले गर्दा हो । राजनीतिमा खेल छिरेको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो तर खेलमा राजनीति छिर्नाले कहिल्यै राम्रो सन्देश गएन । खेलकूदका निकायभित्र केवल आफ्नो पक्षकालाई कसरी नियुक्ति गर्ने र अर्को पक्षकालाई हटाउने खेल मात्रै चलिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण खेलकूद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् हो । त्यसै भएर खेलका लागि विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्नसक्ने हैसियतमा यी दुई निकाय छैनन् । अनि खेलका पूर्वाधारको अभावमा खेलाडीहरू निराश बनिरहेका छन् । सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने खेलका यी दुई टाउके निकाय यति चरम लापरवाह देखिएका छन् कि नेपाली खेलको विकासमा उनीहरूको चासो नै देखिएको छैन । सन्दर्भ नेपाली क्रिकेटको हो । विश्व टी–२० मा सहभागिता जनाएर यसको मान्यता पाएको नेपालले सोही मान्यता अनुसारको प्रतियोगिता गराउने एउटा मैदानसम्म बनाउन सकेको छैन । मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी बनाउने कुरा छेपाराको उखान बन्दैआएको छ । एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छने प्रवृत्तिले नेपाली क्रिकेटले पाएको सफलता थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
अझ कस्तो सम्म देखियो भने खेलाडीहरूले हारेर आएमा आफ्नो जीत हुने क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरूको सोच रहेछ । यस्तो स्थितिले क्रिकेटको विकास कसरी होला ? हालै मात्र नामिबियामा सम्पन्न विश्व लिग डिभिजन २ मा चौथो स्थान हातपार्दै अन्तरमहादेशीय कप र विश्व लिग खेल्ने मान्यता पाएको नेपालका लागि मैदान सबभन्दा ठूलो चुनौति बनिरहेको छ । तर, मैदान बनाउने कसले ? यसै विषयमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले केही दिन क्रिकेटका सम्बन्धमा चलाएको छलफलमा आरोप–प्रत्यारोप र गुनासाहरूको पहाड तर्सिए ।
खेलकूद मन्त्री, सचिव, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका सदस्यसचिव र नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तानलाई बोलाएर गरिएको छलफलमा क्रिकेटको विकासका लागि खेलाडी बाहेक अरुमा गम्भीरता नै देखिएन । मन्त्रीले सदस्यसचिवलाई, अर्थले खेलकूद मन्त्रालयलाई दोष देखाउने जुन प्रवृत्ति देखियो यसले खेलको विकास हैन, खेलको नाममा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मेसो मात्र चलिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ नै नेपाली क्रिकेट पतनको अवस्थामा पुगोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने त खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिवले नै समितिको छलफलमा सुनाए । नेपाली क्रिकेटको अहिलेको टोलीको लगनशीलता, प्रतिभा र मेहेनतका कारण यहाँसम्म आइपुगेको हो र यो टोलीका कप्तन तथा खेलाडीहरू बहसमा समेत राम्रैसंग उत्रनसक्ने र जोकोहीलाई चुनौति दिनसक्ने भएकाले यो टोलीको असफलमा उनीहरूको जीत हुने आशा राखेको रहेछ । “नामिबियामा पारस र उनको कम्पनीले हारेर आएको भए हाम्रो जित हुने थियो” भन्ने जिम्मेवार अधिकारीलाई के भन्ने ? उनीहरू क्रिकेट संघका किन गएको र अब सो पदमा बस्ने नैतिक आधार कत्तिको बाँकी रहन्छ ?
नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पासर खड्का गाडी चलाउन नजान्नेलाई स्टेरिङमा राख्न हुँदैन भन्दै कामगर्न नसक्ने क्यान पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र काम गर्नसक्नेलाई ल्याउनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् । टी २० विश्वकप खेलेर फर्केपछि त नेपाली क्रिकेट टोलीले क्यान बिरुद्ध विद्रोह नै गर्यो । तर यसले पनि खासै उपलब्धि भने भएन । यसबीचमा सरकारले केही चासो देखाए पनि पर्याप्त छैन । प्रशिक्षक पुदुबुलाई सरकारले नै तलब दिने गरी बोलायो । आईसीसीमा राम्रो प्रभाव भएका पुदुबुलाई नेपालबाट लखेट्न क्यानका अधिकारीहरू ज्यान फालेर लागेका थिए ।
के यसरी क्रिकेटको विकास हुन्छ ? क्यानले त्रिविको मैदान भाडा समेत दिएको छैन । कुनबेला ताला मारिन्छ पत्तो छैन । यदि क्यानकै कारण नेपाली क्रिकेट धराशायी भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने । अबको केही महिनापछि नेपालले आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वस्तरीय प्रतियोगिता नेपालमै खेल्नुपर्नेछ । तर, यसका लागि मैदान छैन । हामी एउटा मैदान पनि बनाउन नसक्ने स्थितिमा छौं त ? पक्कै पनि त्यस्तो होइन । बनाउन नसकेको हैन नचाहेको हो । खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउन खोज्ने गलत सोच भएका व्यक्तिहरूका कारण यस्तो भएको हो । नेपालमा विदेशीले पनि र स्वदेशीले पनि क्रिकेट मैदान बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा चासै दिएको छैन ।
खेलाडीहरूले जित्दा फोन गरेर बधाई दिने, विमानस्थलमा स्वागत गर्ने र सरकारका तर्फबाट केही लख रुपैयाँ पुरस्कार दिने बाहेक केही काम भएको छैन । क्रिकेटकै कुरा गर्दा कप्तान पारस खड्का तथा उनका खेलाडीहरूले आफूहरूलाई नगद पुरस्कार दिएर क्रिकेटको विकास नहुने र सरकार क्रिकेटको विकास गर्न चाहन्छ भने मैदान चाहियो भन्दै आएका छन् ।
विश्व अहिले खेल पर्यटनको विकासमा छ । नेपाल क्रिकेटका लागि उपयुक्त र मध्यस्तकर्ताको लो हो । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मैदान हुने हो भने यहाँ ठूलठूला प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ । यसले नेपालको पर्यटन विकास त हुन्छ नै खेलाडी क्रिकेटको पनि विकास हुनेछ । क्रिकेट मैदानमा गरिएको लगानी खेर जाँदैन, त्यसको प्रतिफल आउँछ । तर विकास भनेको सडक र पुल बनाउनु र त्यसमा केही व्यक्तिले कमिशन खानु मात्र हो भन्न मान्यता राखेका व्यक्तिहरूका कारण मुलुकले पाउँदै गएको उचाई कायम राख्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।
क्रिकेटसंगै खेलको विकास गर्ने हो भने लगानीको अभाव हुँदैन, अभाव त केवल नीति, योजना र कार्यान्वयनको हो । निजी क्षेत्र यसमा चासो देखाइरहेको छ । भारतीय कम्पनीले चासो देखाइरहेको छ । आईसीसी र एसीसीले हाइपरफर्मेन्समा नेपाललाई राखेको छ । यो सबै नेपाली क्रिकेटको विकासका आधार हुन् तर सरकारी निकायभित्र घुसेको राजनीतिक विकासले खेल क्षेत्र लथालिंग छ । यो दुर्भाग्य हो ।
अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन (02.10.2015)
बलिदानीको कदर नहुने देश (02.02.2015)
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन (01.26.2015)
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ? (01.17.2015)
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव (12.29.2014)
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ? (12.24.2014)
गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट (12.10.2014)
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई (12.02.2014)